Naptime | သင့်ရဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်း 9000% ကျော် Boost | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အသုံးအဆောင်များ Apps ကပ » Naptime -% 9000 ကျော်သင့်ရဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်း Boost
Naptime - 9000 ကျော်သင့်ရဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်း Boost% APK ကို
မယုံကြည်သောသူတို့ Android ရဲ့ built-in Doze ပါဝါချွေတာရေးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအားပေးအားဖြင့်သင့်ကိရိယာ၏ပျင်းရိစဉ်အတွင်းဘက်ထရီသက်တမ်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ဒါဟာ Marshmallow, Nougat, Oreo နှင့်ယခု Pie ထောက်ခံပါတယ်။ ဒါဟာအမြစ်တွယ် device များအတွက်ပိုပြီးရွေးချယ်စရာတပ်ဆင်ထားသော်လည်း, သင်သည် unrooted နေလျှင်လည်းအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။အဘယ်ကြောင့်?
Doze အံ့သြဖွယ်ရှိသော်လည်း၎င်း၏ quirks ရှိပါတယ်နှငျ့အတူရှိ၏။ (device ကိုစာရေးကိရိယာလျှင်စသည်တို့အားသွင်းမရ,) ဒါဟာအတွက်ကန်အနည်းဆုံး2နာရီကြာနိုင်ပါသည်။ သင်ပင်မျက်နှာပြင်ကိုချွတ်အတူန်းကျင်ကိုရွှေ့နေလျှင်, doze အတွက်ကန်ဒါကြောင့်လေတိုက်နှင့်အတူသွားကြပြီဆုံးရှုံးခဲ့ရအလားအလာဘက်ထရီချွေတာအခွင့်အလမ်းများကိုအများကြီးရှိပါတယ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
မေး: Rootless mode ကို?
Root မလိုပဲ Naptime ရဲ့ features တွေသုံးစွဲဖို့သင်ဤ command ကိုကွပ်မျက်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိ ADB ကနေတဆင့်ခွင့်ပြုချက် dump ကပေးသနားတော်မူဖို့လိုအပ်:
adb -D shell ကိုညနေထောက်ပံ့ငွေ com.franco.doze android.permission.DUMP
သင်တို့သည်လည်း WRITE_SECURE_SETTINGS ခွင့်ပြုချက်ပေးရန်လိုအပ်သည်:
adb -D shell ကိုညနေထောက်ပံ့ငွေ com.franco.doze android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS
အဲဒီနှစျခုခွင့်ပြုချက်ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်ပြီးနောက်သင်လွတ်လွတ်လပ်လပ် Naptime သုံးစွဲဖို့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Q: အသိပေးချက်များကိုမခံမယူကြဘူးသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ဂီတ streaming များ apps များမျက်နှာပြင်အပြီးအလုပ်လုပ်ပယ်ရပ်တန့်။ halp ကျေးဇူးပြု. !
သငျသညျကိုချွတ်ပြပြီးနောက်အတူ '' တက်ကြွ Doze '' doze အတင်းအဓမ္မလျက်ရှိသည်။ Doze, လက်ရှိ Android ပေါ်မှာယန္တရားချွေတာအာဏာအရှိဆုံးဘက်ထရီဖြစ်ပါတယ်။
Doze ရှိနေစဉ်အောက်ပါကန့်သတ်သင့်ရဲ့ apps များလျှောက်ထား:
· Network ကို access ကိုဆိုင်းငံ့လျက်ရှိ၏
·နျ Standard AlarmManager နိုးစက်ကိုနောက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြတင်းပေါက်ဖို့ရက်ရွှေ့ဆိုင်းနေကြသည်:
·အဆိုပါစနစ် Wi-Fi ကို Scan ဖတ်လုပ်ဆောင်မထားဘူး,
·အဆိုပါစနစ်အားထပ်တူပြုခြင်း Adapter က run ဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူး,
·အဆိုပါစနစ်အား JobScheduler run ဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူး,
ပုံမှန်-ဦးစားပေးအသိပေးချက်များကိုသုံးဂျီမေးလ်ကဲ့သို့ Apps ကပ, သူတို့ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြတင်းပေါက်ကာလအတွင်းကယ်နှုတ်တော်မူ၏သို့မဟုတ်အခါသင်သင့်ရဲ့ device နိုးထရှိသည်။ ဤသည်စံအပြုအမူသည်နှင့်မပြောင်းနိုင်ပါ
ပေမယ့်, သငျသညျ doze ကျော်လွှားရန် app များကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ Setting ကိုသွားပါ -> ဘက်ထရီ -> လျတ် -> ဘက်ထရီ optimization -> အားလုံး apps များ -> သင့် app -> ပိုကောင်းအောင်မနေပါနဲ့
ဒါက Spotify နဲ့တူ apps တွေကိုအတင်းအကျပ် doze ရှောင်ကွင်းများနှင့်အမှန်တကယ် screen ပေါ်မှာချွတ်အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
Q: '' အာရုံခံ App ကို whitelist ထဲတွင် '' အင်္ဂါရပ်ကဘာလဲ?
ဒါဟာ '' Disable လုပ်ထားရွေ့လျားမှု detection စနစ် '' အင်္ဂါရပ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်သင်ရွေ့လျားမှု detection စနစ် disable လျှင်ပင်အာရုံခံသတင်းအချက်အလက်ကိုတောင်းဆိုဖို့ကို up-to တယောက် app ကို (တောင်းပန်ပါတယ်, အန်းဒရွိုက်တစ်ဦးတည်းသာ app ကိုမှကျွန်တော်တို့ကိုကန့်သတ်) ရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်ထိုသို့သော Google ကြံ့ခိုင်မှုအဖြစ် apps များ, သင်၏ခြေလှမ်းရေတွက်ဖို့ accelerometer သို့မဟုတ် gyroscope query မှခွင့်ပြုပါတယ်။
မေး: အဘယ်ကြောင့်ငါ့အ Display, တစ်ခါတစ်ရံပေါ်တွင်ပြပြီးနောက်တစ်ချိန်ကမျက်တောင်ခတ်သနည်း?
သင်ရွေ့လျားမှုအာရုံခံကိရိယာကို disable နေလျှင်ဒီဖြစ်ပျက်ပေလိမ့်မည်။ သူတို့အပေါ်ပြပြီးနောက်အလုပ်လုပ်မှုစနစ်ရောင်ခြည် & Auto-Rotate settings ကို on / off toggled ရမည်ဖြစ်သည် (မဟုတ်ရင်သူတို့အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ) နှင့်ထိုကြောင့်ထို (သာစုံတွဲတစ်တွဲမီလီစက္ကန်အဘို့ရဲ့ပင်လျှင်) မျက်တောင်ခတ်စေခြင်းငှါအဘို့ဤများအတွက်အကြောင်းပြချက်, ရိုးရှင်း ။
Q: အဆိုပါအာရုံခံကိရိယာရွေ့လျားမှု detection စနစ် disable သောအခါအကြှနျုပျအလက်ဗွေစကင်နာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး!
ကံမကောင်းစွာရွေ့လျားမှုအာရုံခံထောက်လှမ်းကို disable သည့်အခါအားလုံး devices တွေကိုဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အချို့သောအခြားအာရုံခံကိရိယာ & လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအလုပ်မလုပ်ကိုရပ်တန့်စေခြင်းငှါ, မ။ အဲဒီမှာကအကြောင်းလုပျနိုငျဘာမျှမင်နှင့်သင့်သာ option ကို enabled ဆက်တင်ကြောင်းမသုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ setting ကို enable လုပ်ထားတဲ့လျှင် Display ရဲ့ပင်ကိုထပ်ဖွင့်မထားဘူးအဘယ်မှာရှိ LG ကဖုန်းများနှင့်အတူအချို့သောလိုက်တယ် Compatibility ကိုလည်းရှိပါတယ်။
1 ။ ယခုတွင်သင်သည် / streaming များဂီတနားထောင်နေလျှင် doze အတွက်ကန်မည်မဟုတ်အတင်း🙂
2 ။ ပိုကောင်း doze stats ပိုကောင်းဖတ်နိုင်တဲ့များအတွက် Layout
1 ။ အမြစ်မပါဘဲ doze အလုပ်ကာလအတွင်းက Wi-Fi ကိုကို disable လုပ်လေ၏။ ပိုများသော powa!
1 ။ doze option ကိုအပေါ်ကို disable ဒေတာဖွင့်ပေးထားပေမယ်လံကြိုး Naptime enabled လျှင် (ရေကျော်!) သင့်မိုဘိုင်းဒေတာဖြိုဖျက်မည်မဟုတ်
သငျသညျ Naptime ပျော်မွေ့ပါလျှင်တစ်ဦး Play Store ကိုပြန်လည်သုံးသပ်စွန့်ခွာပါ။ ဒါဟာ Naptime သင်ဘက်ထရီကိုကယ်တင်ကူညီပေးသည်သကဲ့သို့ငါ့ကိုသလောက်ကူညီပေးသည်🙂
Naptime -% 9000 ကျော်သင့်ရဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်း Boost
3.30 ကို MB
Francisco က Franco
အကောင်းဆုံး App ကို Killers ...
လွယ်ကူသောသော့ဖွ - ...